Madheshvani : The voice of Madhesh - संघीयताको भविष्य प्रदेश २ सँग जोडिएको छ : डा.सुरेन्द्र लाभ
संघीयताको भविष्य प्रदेश २ सँग जोडिएको छ : डा.सुरेन्द्र लाभ
प्रकाशित मिति : २०७५ फागुन १०, शुक्रबार
० प्रदेश २ सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
— संघीयताको जहाँबाट माग भयो त्यो भूमि प्रदेश २ नै हो । त्यसैले प्रदेश २ को सरकारबाट अपेक्षा पनि बढी छ र कामको मूल्यांकन गर्ने हो भने अन्य प्रदेशझैं यसको पनि प्रभाव रहेको छ । अर्थात कुनै खास, उल्लेखनीय र आम जनतालाई सन्तुष्टि हुने प्रभावपूर्ण काम भने हुन सकेको छैन ।
० त्यसो भए प्रदेश २ ले केही पनि उल्लेखनीय काम गर्न सकेन ?
— एउटा मात्रै काम ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ नारा दिइयो र यसलाई साकार पार्न एक लाख रूपैयाँको बीमाको ब्यवस्था ग¥यो र यो उदाहरणीय तथा उल्लेखनीय छ । यसबाट अरू प्रदेशले सिक्नुपर्ने कुरा पनि छ । यो कामलाई साह्रै महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । अन्य कामहरू हुन सकेको छैन । मूलरूपमा पूँजीगत खर्च नै हुन सकेको छैन । पूँजीगत खर्च नहुनुको मतलब विकास निर्माण काम राम्रोसँग हुन नसक्नु हो । यो एउटा निराशाजनक अवस्था छ ।
० संघीयतालाई जोगाउन प्रदेश २ सरकारको भूमिका कस्तो पाउनुहुन्छ ?
— संघीयता जोगाउन मुख्यमन्त्रीको प्रयास देखिएको छ । उहाँले धेरै प्रयास गर्नु भएको छ, लड्नु भएको छ र यो कुरो प्रधानमन्त्रीसम्म पु¥याउन पनि सफल हुनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि गत महिना संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि २९ बुँदे सहमति गर्नुभयो । यो एउटा ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि त्यसमा सन्तुष्ट हुनुभयो । तर, त्यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । प्रदेशले प्रयास गरेकै हो तर, यथेष्टरूपमा दबाब दिन सकि रहेको छैन ।
० प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले अन्य प्रदेशभन्दा उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गर्दैछन् भने विपक्षीहरूले असफलतातिर गइरहेको आरोप लगाएका छन् । तपाइँ चाँही के भन्नुहुन्छ ?
— पक्ष र विपक्षमा जाने हाम्रो संस्कार हो । सत्तामा हुनेहरूले ऐतिहासिक काम गरेको भन्छन् र विपक्षीले राम्रो कामलाई पनि आलोचना गर्ने गरेका छन् । तर, यसको मापदण्ड के त ? यसको मूल्यांकन जनताले गर्छन् । आमजनताले अनुभूति गर्न सक्नुप¥यो । अहिलेसम्मको अवस्थामा आमजनताले त्यस्तो खासै अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सन्तुष्टिको कुनै ठाउँ पाउन सकिएको छैन, त्यसैले निराशाजनक हो । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको समय उद्घाटन, सभा समारोह अतिथि बन्न मात्र बिति रहेको छ । यो राम्रो संकेत होइन । किनभने प्रदेशको यो पहिलो सरकार हो, यसले उदाहरणीय काम गर्न सक्नुपर्छ ।
० भनेपछि, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू सभा समारोहमै व्यस्त छन् ?
— बिल्कुल सही कुरा हो । किनभने हरेक दिनको उनीहरूको समय तालिका हेर्ने हो भने काममा कम, नाममा बढी लागेका छन् । उनीहरूको कामको प्रतिफल जनताले अनुभव गर्न सकेका छैनन् । तर, समय अहिले पनि छ । उनीहरूले जनताका असन्तुष्टि बुझेर काम गर्न सके भने अझ चार वर्ष बाँकी छ । नेपालमा संक्रमणकाल अन्त्य भएको छ र सिकारूकाल हो यो । अहिले पनि मन्त्री भएका उनीहरूसँग अनुभव थिएन, त्यसैले उनीहरूको सिकाइको बेला पनि हो ।
० संघीयतालाई सफल बनाउन प्रदेश सरकारले के गर्नुपर्ने हो ?
— प्रदेश सरकारले आफ्नो छवि सुधार्न आवश्यक छ । प्रदेश बनेपछि विकास हुन्छ, यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश २ को भूमिबाट संघीयताको आवाज किन उठ्यो भने केन्द्रीकरण पद्धतिबाट विकास नहुने रहेछ । त्यो ‘स्प्रिट’लाई अहिले पनि देखाइदिनुपर्छ । ८–१० घण्टा काम गरेर हुनेबाला छैन । उनीहरूले एउटा साधारण व्यक्तिसरह नै दिनरात मिहिनेत गरेर काम गर्नुपर्छ । यसरी काम गर्न सकियो भने जनता र अन्य प्रदेशका लागि पनि उदाहरणीय हुन सक्छ । यसले संघीयतालाई प्रमाणित पनि गर्न सक्छ । त्यसैले, संघीयता जाने डर पनि यहींबाट छ र सफल हुने सम्भावना पनि छ ।
० प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको अनुभवका अभावको कारण पनि राम्ररी काम हुन सकिरहेको छैन ?
— अनुभवको अभाव त छदैँ छ, र प्रदर्शनको प्रभाव पनि छ । विगतमा जसरी मन्त्रीहरूको जुन रवाफ थियो त्यसबाट पनि उनीहरू नराम्ररी प्रभावित छन् । उनीहरू आफूलाई परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनन । यो कुराबाट अहिले पनि होस आयो भने गर्न सक्छन् । यो सरकार क्रान्तिकारी स्टेप तिर जान सकेको छैन ।
० त्यसो भए प्रदेश २ सरकारले दीर्घकालीन योजनाका कामहरू गर्न सकिरहेको छैन त ?
— यो प्रदेश सरकार पनि झाराटार जस्तै काम गरिरहेको छ । जुन काम प्रदेशसभाभित्र हुनुपर्ने हो, त्यसका लागि आयोग गठन गरेर अनावश्यक काम भइरहेको छ । उदाहरणका लागि प्रदेशको नाम र राजधानीको बारेमा प्रष्टरूपमा लेखिएको छ कि प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्ने । यसको बहस प्रदेशसभामा हुनुपर्ने तर, नीति आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरियो र जिल्ला–जिल्लामा दौडाइदियो । त्यो अनावश्यक खर्च पनि हो । त्यसबाट कुनै ठोस उपलब्धि हुनेवाला छैन ।
० प्रदेश २ मा प्रतिपक्षीहरूको भूमिका कस्तो पाउनु भएको ?
— प्रदेश २ का प्रतिपक्षीहरू पनि अलिकति अनट्रेन्ड र सिकारूजस्तै छन् । कतिपय ठाउँमा त ठिकठिकै विरोध गर्छन् तर सशक्तरूपमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको पाइँदैन । जसरी नाम र स्थायी राजधानीका लागि प्रदेश सरकारले कमिटी गठन ग¥यो त्यसको विरोध प्रतिपक्षले प्रदेशसभामा गर्नुपर्दथ्यो । त्यसैले प्रतिपक्षमा पनि दक्षताको अभाव छ ।
० सत्तारूढ दलका केन्द्रीय नेतृत्वले यस प्रदेशप्रति कतिको निगरानी गरिरहेको पाउनुहुन्छ ?
— प्रदेश २ का सत्तारूढ दलभित्रै पनि अन्योलको अवस्था देखिएको छ । फोरम नेपालको केन्द्रमा एउटा नीति देखा पर्छ भने प्रदेशमा अर्को नीति देखा पर्छ । संविधान दिवसकै दिन यसको उदाहरण देखियो । राजपा नेपालभित्र पनि यस्ता अन्तर्विरोधहरू बेलाबखतमा देखा पर्छ । एउटा अध्यक्षले नियुक्त गर्छ अर्को अध्यक्षले खारेज गर्छ । यसले आम जनतामा राम्रो सन्देश सम्प्रेषण भइरहेको छैन । आन्दोलनको स्प्रिटमा उनीहरू हिंड्न सकेका छैनन् । यसको मूल्यांकन पनि आमजनताले गरिरहेका छन् ।
० प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमा केन्द्रप्रति आक्रोश पोख्दै आएका छन्, यो कतिको जायज हो ?
— उनको आक्रोश सही भएपनि बाटो सही भएन । उनको लोकप्रिय नारा जस्तो भइदियो । जबकि उनकै पार्टी केन्द्रमा पनि छ अहिले । उनको पार्टीका अध्यक्ष महत्वपूर्ण स्थानमा छन् । उनको पार्टीले दबाब दिनुपर्दथ्यो । उनको कुनै असन्तुष्टि छ भने आफ्नो पार्टीमार्फत् दबाब बनाउनुपर्छ ।
० भनेपछि, मुख्यमन्त्रीले लोकप्रियता मात्रै हासिल गर्न खोजेका हुन हो ?
— यो कुरा जनताले पनि अनुभूति गरिरहेका छन् । केन्द्रले बढी बजेट दिएन, कर्मचारी पूर्ति गरेन, अधिकार कटौती ग¥यो भन्ने किसिमका गुनासाहरू छन्, तर जति बजेट र अधिकार दिइएको छ त्यो पनि उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । लोकप्रियताका लागि मात्रै त्यस्ता कुराहरू गर्ने हो भने त्यसले राम्रो परिणाम दिँदैन ।
० अब केन्द्रको कुरा गरौं । अहिले नेपालकै शक्तिशाली सरकार छ तर कामको प्रभावकारिता देखिएको छैन । यो दुई तिहाईको सरकारले पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भने नेपालमा कस्तो सरकार चाहिन्छ ?
— यो एउटा ठूलो यक्ष प्रश्न हो । प्रजातान्त्रिक कालमा यस्तो दुई तिहाईको सरकार नेपालमा प्रथमपटक निर्माण भएको छ । यसले परिणाममुखी काम गर्न सक्नुपर्दथ्यो । सत्तापक्षकै बीचबाट पनि असन्तुष्टिका विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ । लोकप्रियताका लागि नारा ठूलो दिइन्छ, तर व्यावहारिकरूपमा काम हुन सकेको छैन । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नेतिर पनि इमान्दारिता देखिएको छैन । अहिले देशलाई फटाफट काम चाहिएको छ । समृद्धिको नारा लगाइन्छ, तर समृद्धि कसरी ल्याउने त्यो भिजन छैन । राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर आर्थिक परिवर्तन नभएको जनतामा सन्देश गइरहेको छ ।
० प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिका किन देखिएको छैन ?
— प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको पनि भूमिका सशक्त छैन । कांग्रेसभित्रै विभिन्न गुटउपगुटहरू छन् । अहिलेको सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भने जनताले अब विकल्प खोज्छ । तर, जनतासँग विकल्प पनि छैन । प्रतिपक्षी दल नै कमजोर भएकोले यो दुई तिहाइको सरकारले दबाब पनि पाउन सकेको छैन । यदि कांग्रेसमा इमान्दार नेताहरू भइदिएको भए पर्याप्त मात्रामा दबाब सिर्जना गर्न सक्थ्यो ।